बिएण्डसी अस्पतालमा क्याथल्याव सेवा सञ्चालन - Ujyaalo Nepal
बर्दिबास गोलीकाण्डको छानविन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन
भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणः सम्वादको शुरुवातलाई क्षणिक फाईदामा सीमित नगर्न अध्यक्ष थापाको सुझाव
थप १६१४ जनामा कोरोना संक्रमण, २३ जनाको मृत्यु
परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठक फलदायी र उपयोगीः विदेशसचिव श्रृंगला
बिएण्डसी अस्पतालमा क्याथल्याव सेवा सञ्चालन
By ujyaalo	 Last updated Nov 7, 2020 23
झापा । झापाको बिर्तामोडस्थित विएण्डसी अस्पतालले मुटुका रोगीका लागि क्याथल्याव सेवा सुरु गरेको छ । अस्पतालले शनिबार बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी अस्पतालमा क्याथल्याव सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
मुटु रोगीहरुलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यले क्याथ ल्याव सेवा सञ्चालनमा ल्याएको पत्रकार सम्मेलनमा अस्पतालका कार्डियोलोजिष्ट डा उमेश यादवले जानकारी दिए । अस्पतालले आगामी २ बर्ष भित्र मुटु समेत प्रत्यारोपण गर्ने गरीको तयारी थालेको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले अब मुटुका विरामीले उपचारका लागि भारतको दिल्ली, भेलोर र काठमाडौं जानु नपर्ने बताए ।
अस्पतालमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. उमेश यादव सहितको टोलीले सेवा प्रदान गर्ने र आजबाट सेवा समेत सुरु भएको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी प्रमिश गिरीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा भारतको चेन्नईबाट आएका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अवनकुमार, अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर निराजन पराजुली, अस्पतालकी अध्यक्ष इन्दिरा गिरी लगायतले अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७७, शनिबार ११:३१
भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणः सम्वादको शुरुवातलाई क्षणिक फाईदामा सीमित नगर्न…